FAMPAHALALANA SY SARY AVY AMIN'NY NORFOLK TERRIER DOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary avy amin'ny Norfolk Terrier Dog
Ivy the Norfolk Terrier amin'ny 2 taona
Ny Norfolk Terrier dia alika matanjaka, matanjaka, fohy ary fohy. Boribory somary boribory ny loha, ary malalaka amin'ny habaka malalaka eo anelanelan'ny sofina. Mahery ny vavam-borona miendrika wedge, misy fijanonana voafaritra tsara. Ny maso kely boribory lavalava dia miloko mainty. Kely ny sofina, mihantona mafy eo amin'ny takolany. Mahitsy ny tongotra ary boribory ny rantsan-tongony misy rantsan-tongotra mainty. Ny rambony salantsalany dia napetraka avo sy avo amin'ny topline ary matetika ampidirina antsasaky ny tendrony. Fanamarihana: tsy ara-dalàna ny manisy rambony amin'ny ankamaroan'ny Eropa. Ilay palitao mahitsy sy mahitsy dia sahabo ho iray sy sasany ka hatramin'ny roa santimetatra ny halavany. Ny lokon'ny palitao dia misy mena, wheaten, tan, mainty sy mainty, na grizzle misy na tsy misy teboka maizina ary indraindray misy marika fotsy.
Ny Norfolk Terrier dia iray amin'ireo kely indrindra amin'ny terriers miasa. Mavitrika, be herim-po, be fitiavana, voalanjalanja ary tsy misy fitaintainanana na fifandirana. Mora ny mampiofana ary mila fitsipika mifanaraka amin'izany. Ireto alika kely ireto dia tia ny olona rehetra ary tsara amin'ny ankizy. Noho ny toe-tsain'izy ireo mandady dia aleon'izy ireo mitia izay azonao atoraka azy ireo toy ny kilalao, baolina, tapa-kazo na taolana. Raha avela any ivelany mandritra ny fotoana maharitra tsy misy atao, tsy manome a tongotra lavitra afaka mandany ny herin'izy ireo dia mety ho lasa mpitrandraka sy mpihady. Ity karazana ity dia amin'ny ankapobeny dia tsara amin'ny biby hafa toy ny saka sy alika, saingy tsy tokony hatokisana biby kely toy ny hamsters , voalavo biby , totozy na kisoa ginea . Aza avela hivoatra ity alika kely ity Syndrome kely alika , izay inoan'ilay alika fa izy dia mpitarika ho an'ny olombelona. Izany dia mety hiteraka karazana fahasamihafan'ny fitondran-tena isan-karazany ao anatin'izany, saingy tsy ferana amin'ny, fanahiana fisarahana , fialonana ary fihetsika miambina . Afaka ny ho izy ireo sarotra vaky trano .
Haavony: 10 santimetatra (25 cm)
Lanja: 10 - 12 pounds (4½ - 5½ kg)
Ireo no kely indrindra amin'ny terriers.
Ny tsipika sasany dia mora voan'ny lamosina sy areti-maso amin'ny fototarazo, nefa salama amin'ny ankapobeny.
Norfolks dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampy ny fampiasan'izy ireo. Mavitrika ao an-trano izy ireo ary tsy maninona raha tsy misy tokontany.
Ireto alika kely ireto dia nompiana mba hiasa. Matanjaka izy ireo ary mivelona amin'ny fiainana mavitrika, ary mila raisina a mandeha isan'andro . Afaka izy ireo mihazakazaka lavitra . Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona. Ampianaro izy ireo hiditra sy hivoaka ny varavarana rehetra sy ny vavahady aorian'ny zanak'olombelona.
Ny palitao marefo sy salantsalany ary tsy tantera-drano dia somary mora ihany, fa ny fikolokoloana sy ny fikosehana isan'andro dia zava-dehibe. Clipping kely no ilaina. Mitandrema bebe kokoa rehefa mandroaka ny alika. Mandrosoa sy shampooing maina raha tsy ilaina. Ity karazana ity dia mpamafa hazavana.
Namboarina tany Anglia Atsinanana, Angletera, ny Norfolk ary Norwich Terriers taloha dia karazany iray ihany miaraka amina karazana sofina roa samy hafa izay nantsoina hoe Norwich Terrier. Ny Anglisy no voalohany nanasaraka azy ireo tamin'ny 1964. Tamin'ny 1979 dia noheverin'ny AKC tamin'ny fomba ofisialy ho toy ny karazany misaraka, ny Norwich dia manana sofina kely sy marokoroko ary ny Norfolk misy sofina milatsaka. Ny tsy fitovizany kely hafa dia ny Norfolks dia manana endrika zoro ary boribory kokoa ny Norwich Terriers. Ireo alika dia nampiasaina ho mpandefa barazy ary bolt amboahaolo izay nidina tany amin'ny fihazana amboahaolo. Ny haben'ny habeny dia namela azy ireo hiditra sy hivoaka mora foana tamin'ny fantsakan'ny amboahaolo. Aorian'ny famoahana ireo amboahaolo avy any an-tranony, dia hanohy ny fanenjehana ireo mpihaza mitaingin-tsoavaly ireo.
Alika kely pitbull 7 volana
Ivy the Norfolk Terrier toy ny alika kely amin'ny 9 herinandro
Jessie the puppy Norfolk Terrier mena amin'ny 9 herinandro
Belle the Norfolk Terrier mijery tsara amin'ny palitao fanatanjahan-tena
Ny fenitra AKC dia miantso ny Norfolks hamono ny rambony. Ny tompon'ny Belle dia nanapa-kevitra ny tsy hanapaka ny rambon'i Belle, avelany ho voajanahary. Tsy i Belle irery no Norfolk manana rambo voajanahary any amin'ny faritra eran'i Eropa fa tsy ara-dalàna ny manangona sofina alika na miantsona ny rambony.
alika rano portuguese fotsy sy fotsy
Belle dia Norfolk faly!
Brody toy ny alika kely amin'ny 7 herinandro dia Norfolk Terrier miloko mena.
Brody toy ny alika kely amin'ny 7 herinandro maka hatory kely dia Norfolk Terrier miloko mena.
Hijery ohatra misimisy kokoa momba ny Norfolk Terrier
Norfolk Terrier Sary 1
shar pei laboratoara mifangaro mix
jack russell terrier mifangaro amin'ny collie border
mpiandry alemaina malamute husky mix
mifangaro boxer mainty sy fotsy